- လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
ဖုန်းနံပါတ် - ၀၂-၇၃၀၄၁၊ ၀၂-၆၀၂၄၉၊ ၀၂-၇၃၀၄၂
၃၀ လမ်း x ၆၈ လမ်းထောင့်။
ဖုန်းနံပါတ် - ၀၂-၇၄၃၆၂
ဖုန်းနံပါတ် - ၀၂-၃၆၉၄၃
၈၃ လမ်း၊ ၂၃ x ၂၄ လမ်းကြား။
ဖုန်းနံပါတ် - (တိုင်း)၀၂-၆၃၁၁၇၊ (ခရိုင်)၀၂-၆၀၂၉၀
၇၈ လမ်း၊ သီတာအေးရပ်။
ဖုန်းနံပါတ် - ၀၂-၃၉၀၇၄
တိုင်းဒေသကြီးကုန်တင်ကုန်ချ ကော်မတီရုံး (တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ဘတ်ဂျက်)
ဖုန်းနံပါတ် - ၀၂-၂၁၀၃၄(ဇုန်နယ်မြေရုံး)၊ ၀၂-၂၁၀၄၆
၃၅ လမ်း၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်အနောက်။
ဖုန်းနံပါတ် - ၀၂-၆၃၉၇၆၊ ၀၉-၅၁၅၂၄၂၃
၃၅x၉၀ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ဖုန်းနံပါတ် - ၀၂-၇၅၁၄၈
၁၂ လမ်း x ၁၄လမ်းကြား၊ ၆၆လမ်း၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်။
Web Admin	2019-08-21 11:11:25
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက် မန္တလေးမြို့၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ ၁၂ လမ်းနှင့် ၇၃ လမ်းထောင့်ရှိ လူငယ်သင်တန်းကျောင်းအတွက် အလှူရှင်များ၏ လှူဒါန်းမှုဖြင့် လိုအပ်သည့် တည်ဆောက်ခြင်းများနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ပြီးစီး၍ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲကို သြဂုတ် ၂၀ ရက် နံနက် ၉ နာရီက အဆိုပါ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပသည်။ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲသို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ သယံဇာတနှင့်...
Web Admin	2019-06-18 11:40:23
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၇ရက် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူများအသင်း(မန္တလေးရုံး)၏(၉)နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကို ဇွန်လ ၁၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီက မန္တလေးမြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားသို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာခက်မောင်ဌေး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာခင်မောင်ဌေး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန...
Web Admin	2019-06-10 11:20:36
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ရက် မြန်မာနိုင်ငံရင်ခွင်မဲ့ကလေးငယ်များ လျှော့ချရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း၏ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်၊ ခရိုင်အဆင့်၊ မြို့နယ်အဆင့်အသင်းများအား အလံပေးအပ်ပွဲနှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ ကတိသစ္စာခံယူပွဲအခမ်းအနားကို ဇွန်လ ၉ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲက မင်္ဂလာမန္တလေး ရှင်းလင်းဆောင်တွင် ကျင်းပသည်။ ရှေးဦးစွာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသမီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ သယံဇာတနှင့်...
Web Admin	2019-06-05 12:22:57
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၄ ရက် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန သစ်တောဦးစီးဌာနကပြုလုပ်သည့် သစ်တောနည်းဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ၏ အကြံပြုချက်များရယူခြင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကို ဇွန်လ ၄ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲက ၇၈ လမ်း၊ ၃၇ လမ်းနှင့် ၃၈ လမ်းကြား၊ Hotel Mandalay ၌ ကျင်းပသည်။ အခမ်းအနားတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ...
Web Admin	2019-05-30 11:47:59
၂ဝ၁၉ ခုနှစ် မေလ ၂၉ ရက် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့နှင့် ILO-VZ တို့ပူးပေါင်း၍ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှု အကျိုးခံစားခွင့် အာမခံစနစ် လုပ်ငန်းဖြေလျော့မှုစမ်းသပ်စီမံက်ိန်း စတင်ခြင်းအခမ်းအနားကို မေလ ၂၉ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက ၇၈ လမ်းနှင့် ၃၄ လမ်းထောင့်၊ ရတနာပုံစူပါစင်တာ...